Mulkiile diiday in Hotelka dadka lagu karantiilo oo Hargeysa lagu xidhay
March 26, 2020 Mahad Jama 4
LAASCAANOOD(P-TIMES)- Wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland ayaa sheegaya in ciidamada Booliska Somaliland ay xabsiga u taxaabeen Mulkiilaha Hotelka Sky oo ku yaalla xaafadda Maslaha, kadib markii uu diiday in dadka qaba cdurka Coronavirus lagu Karaantiilo Hotelkiisa.
Wararka ayaa intaas kusii daraya in guddiga u diyaar garowga caabuqa Corona ay u yimaadeen Mulkiilaha Hotelka Axmed Odowaa kadibna ay ka dalbadeen in Hotelka lagu Karantiilo dadka qaba Coronavirus, taas oo keentay in uu ka biya diido dabadeedna xabsiga ay u taxaabeen ciidamada isaga iyo xaaskiisaba.
Dadka ay ka dalbadeen guddiga Mulkiilaha Hotelka in lagu karantiilo ayaa la sheegay in ay yihiin qaar kamid ah dadkii la socday diyaaradda Ethiopian Airlines oo maalmo ka hor ka degtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland.
Guddiga xukuumadda Somaliland ay u magacawday u diyaar garowga caabuqa Corona ayaa qaaday talaabooyin dhowr ah tan iyo intii la magacaabay, iyaga oo amray in dadku ay ka fogaadaan goobaha la iskugu yimaado sida maqaayadaha iyo meheradaha kale ee dadku kulmin karaan.
ma qasab baa in hudheelkisa dad lagu karantilo???. S/L qofki amarka dowladoda diida mala xidhayaa? yaab badana beryahan somali land xabsigay uga shidan tahay
ma qasab baa in hudheelkisa dad lagu karantilo???. S/L qofki amarka dowladoda diida mala xidhayaa? yaab badana beryahan somali land xabsigay uga shidan tahay malaha
Dawladu hadey u baahato in ay cisbitaalkaaga, hudheelkaaga ama bakhaarkaaga isticmaasho ma diidi kartid. Waa iney heysaa sabab wanaagsanse.
Imika Cisbitaalada gaarka loo leeyahay ee Hargeysa ku yaal waxa lagu amrey in hadii loo baahdo ay Dawladu isticmaali doonto. Amarka degdega ahbaa sidaas u shaqeeya. Nuwaadinku xuquuq wuu leeyahay, laakiinse xuquuqdaasi markan oo kale wey xadidmeysaa. Ingiriisku imika wuxuu amray in aad gurigaaga ku jirto. Halmarbaaf soo bixi kartaa si aad jimicsi u sameyso.
Waa in la xidho isga Iyo naag tiisa isagaa Hotelka dejiyay dad xanuunsanayay diiday amarka dawlada.. waa ina la xidho la ciqaabo.